Qhagamshelana ne-Dubai City Inkampani Sikulindele i-Expats 🥇
Silandele kumajelo asekuhlaleni | Inkampani yeSixeko sase Dubai
I-Dubai City Inkampani inika iNkcazo ye-Dubayi yeklasi kunye nebali elithakazelisayo. Siyinkampani yokudala eneengcamango ezininzi kunye nokunyuswa kokusasazwa kweendaba zoluntu. Sikholelwa kumandla okuqonda kwentlalo ukuqhuba ixabiso leshishini eMbindi Mpuma.
Dubai City Inkampani - Facebook
Dubai City Inkampani - Twitter
I-Dubai City Inkampani - Pinterest
Dubai City Inkampani - Instagram
Dubai City Inkampani - Angel.co
I-Dubai City Inkampani - Behance
Dubai City Inkampani - Youtube
Cela isicelo ungasifumani
Ungasukeli: UkuKhangela kweMisebenzi kunye neeVisa
Mbuyisele kwangoko kuloo ndawo, akukho mbuzo ubuzwayo.
Kwimeko apho awufumani msebenzi ngeentsuku ze-60? Ungathumela isicelo sokubuyiselwa kwemali:
refund@dubaicitycompany.com Le nkqubo ithatha i-3-7 yeentsuku zeshishini ukuyigqiba, kwaye imbuyiselo iya kubuyiselwa kwikhadi lakho lebhanki.
Faka i-CV: Inkampani yeDubai City
Ngoku: Ungayifaka iCV mahala kwinkampani yethu
Kwimeko apho awunamali? Ungathumela i-CV yakho ehlaziyiweyo kwiqela lethu:
resume@dubaicitycompany.com Iqela lethu liya kujonga kwiinkcukacha zakho. Siyakuthumela umyalezo ngolwazi oluthe kratya.
Ukwenza isicelo soLwazi
Ngoku: Nxibelelana neqela lethu
Kwimeko apho ungathanda ukufumana ulwazi oluthe kratya Ungathumela isicelo solwazi kwiqela lethu:
office@dubaicitycompany.com Iqela lethu liya kujonga isicelo sakho kwaye libuyele kuwe ngaphakathi kweentsuku ze-3.
dubai Isixeko, i-United Arab Emirates
Umgaqo-nkqubo we-Digital Millennium Copyright Act - DMCA
Umthetho wabucala - Policy
Imimiselo noMqathango - ngokwemiqathango
Igama Company: Inkampani yeSixeko sase Dubai
Inombolo ye Nkampani 09578474
Xhumana Nathi - I-Dubai City Inkampani ilinde wena!
Xha ga mshelana ngolwazi olungakumbi. Ngenxa yokuba Dubai City Iqela lenkonzo yabathengi. Ngokuqinisekileyo ilinde impendulo yakho. Ukuba ungathanda ukunxibelelana. Omnye wabameli bokuqesha. Nceda usebenzise i-imeyile yethu yenkampani kwi IUnited Arab Emirates. Inkampani yethu ihlala isamkela abafuna umsebenzi. Ngemibuzo emininzi kunye nemibuzo eDubai, sazise. Ngokukodwa ukuba ufuna ingqesho kuMbindi Mpuma. Kwelinye icala, sihlala samkela abasebenzisi abatsha ku- ukuthumela i-resume ehlaziyiweyo. Injongo yethu kukukhokela ukukhangela umsebenzi arhente yokubonisana eDubai.
Dubai City Inkampani enceda iinkampani zokufumana abasebenzi ukufumana abasebenzi. Sisebenza nabo bonke abasebenzi abafuna umsebenzi. Umsebenzi wethu kukuchonga izisombululo zomsebenzi. Abagxothwa kwi UAE. Ngaphezu koko, umnqweno wethu kukulunga ishishini njongo nathi. Nokuba ujongile ukufumana imisebenzi yolawulo. Nendawo yokuthengisa enezakhono okanye nokuba amabhanki kunye namathuba emisebenzi emali. Ubugcisa kunye nomsebenzi wezomthetho. Kanye namathuba okubonelela abantu. I-Dubai City Inkampani inokukunceda. Ngeendlela zonke zendlela.
Soloko uthetha neengcali zokuqasha e-Dubai!
Njengombandela wenyani, sinika isandla ukunceda ixesha elide. Nangona oku kunokuba yinyani. Kodwa ngaphezulu kwe-1Million yokukhangela umsebenzi iindwendwe. Sebenzisa inkampani yethu ngononophelo lokufumana umsebenzi eDubai. Ngesi sizathu, sithumela isikhokelo sokukhangela umsebenzi zokuthengisa eDubai. Nokuba ungavelaphi. Jonga kuthi Ibhulogi yase-Dubai yokuthumela. Kwaye ngenxa yoko, fumana umsebenzi wakho wephupha eDubai kunye nenkampani yethu yokukhangela umsebenzi. Ngaphantsi kwezo meko, sisongele iinkcukacha guides. Umzekelo, unako ulayishe i-CV kubaqeshi base Dubai. Uze ufumene indlela iinkampani zoqhagamshelwano kwi-Gulf jobs. Konke okuya kuphakamisa amathuba akho okusebenza kwi-UAE.
Qhagamshelana ne-Dubai City Inkampani